कोरोनाले यसरी खोलिदिएको छ पुँजीवादको सार चरित्र – Sandesh Munch
पुँजीवादीहरु कोरानाको क्षतिलाई युद्धआतङ्कद्वारा पूर्ति गर्ने र आफ्नो असफलतालाई छोप्ने ध्याउन्नमा छन् ।
नेपालका समृद्धिका अभियान्त्र भन्नेहरु प्लास्टिकको फूल जस्ता भएका छन् हेर्दा सुन्दर देखिने तर फूलमा पाइने मूल तत्व नै नभएका ।
कोरोना महामारीले सिङ्गो मानव जातिलाई असीमित क्षति गरेको छ परन्तु यसले पुँजीवादी विश्व–अर्थराजनीतिक सम्बन्धका केही महत्वपूर्ण विशेषताहरू पनि खोलिदिएको छ । यसलाई मनन गर्न आवश्यक छ । पहिलो कुरा पुँजीवादी सम्पन्नता र वास्तविक सम्पन्नता एउटै होइन । रूपगत सम्पन्नताभित्र कैयौँ अव्यवस्था, अपूर्णता र सङ्कट बाँचिरहेका हुन्छन् भन्ने खुलस्त भएको छ । बाहिर देखिने भव्यता भित्रभित्रै मक्किँदै गएको हुनसक्छ ।
कैयौँ विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले खुब मच्चिएर दाबी गरिरहेका थिए– पुँजीवाद र पुँजीवादी समृद्धि, सम्पन्नता नै आजको यथार्थ हो । यसको विकास र निरन्तरता अझै परसम्म सहजै जानेछ । नेपालजस्तो देशमा त पुँजीवादलाई बाटो छोडिदिनुपर्छ । चैतन्य मिश्रको भाषामा ‘जिउँदोजाग्दो पुँजीवाद’ लाई स्वीकार गर्नुपर्छ । परन्तु कोरोनाले खोलिदियो बाहिर समृद्ध देखिए पनि त्यो खोक्रो र मक्किसकेको हुनसक्छ । त्यो समृद्धिले समाज र नागरिकहरूको संरक्षण र सुरक्षा दिने त कल्पनै नगरौँ आफ्नै अस्तित्वलाई समेत थेग्न नसक्ने गरी सडिसकेको हुन्छ ।
आज बाह्य दृष्टिले युरोप, अमेरिकालगायत संसारका पुँजीवाद समृद्धिका केन्द्र मानिन्छन् तर कोरोनाले देखायो– ती देशहरूमा नै नागरिकहरूले सबैभन्दा डरलाग्दो क्षति र समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ । नागरिकहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् । औषधिको अभाव छ । अस्पतालहरू अपर्याप्त भएका छन् । करोडौँको रोजगारी समाप्त भएको छ । उल्टो सापेक्षित रूपले कमजोर देखिए पनि अर्थराजनीतिक दृष्टिले फरक रहेका समाजवादी देशहरू र लोककल्याणकारी राज्यमा कोरोनाको प्रभाव कम देखियो । नोम चोम्स्कीको विश्लेषणमा क्युबा त स्वास्थ्य महाशक्तिकै रूपमा अगाडि आयो । यसरी हेर्दा पुँजीवादी विश्वमा देखिने समृद्धि प्लास्टिकको फूल हो जो हेर्दा वास्तविक फूलभन्दा सुन्दर देखिन्छ तर फूलमा पाइने मूल तत्व नै त्यसमा हुँदैन ।
सामाजिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका मुख्य हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने तर्क छाँट्ने मान्छेहरू यतिबेला लाचार देखिएका छन् । उनीहरूको निजीप्रधान सोचाइ मुनाफा कुम्ल्याउने धूत्र्याइँमा परिणत भएको छ । स्थिति कस्तो डरलाग्दो देखियो भने निजी क्षेत्रले करोडौँ नागरिकहरूलाई रातारात बेरोजगार बनाएर अभाव, गरिबी, भोकमरी र आत्महत्याको अनिश्चित कालो सुरुङतिर हुल्दैछ । नाफाका लागि भर्ती गरिएका श्रमिकहरूलाई आफ्नो नाफा कम हुने देखिँदासाथ एकरत्ति सुरक्षाभाव नराखेर सडकमा पुर्याइदियो ।
मालिकहरू उल्टै राज्यबाट अर्बौंअर्बको क्षतिपूर्ति र सहुलियतको माग गरिरहेका छन् । युरोप, अमेरिकालगायत देशमा राज्यले मालिकहरूको क्षतिपूर्ति गर्न खर्बौं डलरको बाढी बगाउनु परेको छ । सङ्कटमा राज्यको पुँजी लिएर बाँच्नुपर्ने हो भने नवउदारवादी अर्थप्रणालीको महिमागान किन गर्नुपर्ने हो र यसलाई विश्वको नमुना अर्थसम्बन्ध कसरी मान्न सकिन्छ ! अझ हाम्रोजस्तो पैसा बेचेर पैसा कमाउने पूरा परनिर्भर दलाल पुँजीवादी अर्थसम्बन्धलाई किन प्रश्रय दिने ! स्पष्ट छ– सामाजिक उन्नति एवम् नागरिक समृद्धिका लागि मात्र होइन, निजी सम्पन्नताका लगि पनि राज्य–पुँजी मुख्य हुन्छ ।
दोस्रो : नाफा कमाउनु र पैसा जोगाउनु मुख्य हो, रोग र मृत्यु सामान्य हो भन्ने लुटवादी, अमानवीय एवम् असामाजिक चरित्र प्रदर्शन गर्दैछन् । सुरुमा विकास र समृद्धिको अहङ्कारमा डुबेका पुँजीवादीहरूले कोरोना पस्नै सक्दैनजस्तो रबैया प्रदर्शन गरे । जब कोरोना रोक्नमा पूरै असफलजस्तो बन्न पुगे, पुँजीवादी अव्यवस्थाका कारण लाखौँ नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो र खर्बौं डलर बगाउँदा पनि नपुग्ने भयो तब पुँजीवादी नाइकेहरूले अति विचित्र, असभ्य र अमानवीय तर्क गर्न पुगेका छन्– मानवीय क्षतिभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक क्षति हो ।
त्यसबाट बच्नका लागि बजार खुला गर्न, व्यापार चलाउन र व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यो कुरा ट्रम्पले मात्र होइन, जोनसोन, सुनारो, म्याक्रो सबैले एउटै स्वरमा भन्न पुगेका छन् । यस्ता तर्कको स्पष्ट सन्देश कोरोनाको सङ्कट केवल स्वास्थ्यमा मात्र सीमित नभएर राज्यव्यवस्थाको सङ्कटमा परिणत हुन सक्छ र जुनकुनै बेला पनि अर्को अक्टोबर क्रान्ति विस्फोट हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ । पुँजीवादीहरूको अर्थराजनीतिक गणितमा नागरिक र समाजको जीवनभन्दा पुँजी र मुनाफाप्रधान हो, मान्छे मरेर फरक पर्दैन, ती फेरि जन्माउन सकिन्छ तर पैसा गुम्यो भने सत्ता नै गुम्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निक्लेको छ ।
मानवसमाजको विकासले असफल सिद्ध गरेका तर बलजफ्ती अस्तित्व रक्षामा उत्रिने अर्थराजनीतिक व्यवस्थाका कारण मानव जातिले इतिहासदेखि अपूरणीय मूल्य चुकाउनुपरेको छ । पोप, मुल्लाह, पुजारीहरूको शासनलाई झूट साबित गर्न बु्रनोहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो । कोपर्निकस, ग्यालिलियोहरूले सास्ती बेहोर्नुपर्यो । आज प्रो. हरारेले भनेजस्तै विज्ञानमा विश्वास गर्ने क्रम बढेकाले कोरोनामा चर्च, मस्जिद, गुम्बा, मन्दिर बन्द हुन बाध्य भएका छन् । अर्को शब्दमा आज मानव जातिले विज्ञानको अभूतपूर्व रसास्वादन गर्न पाएको छ ।
परन्तु पुँजीवादबाट समाजले त्यही पीडादायी तर बहन गर्नैपर्ने व्यवहार भोग्नु परिरहेको छ । व्यवहारतः पुँजीवाद बेकम्मा र औचित्यहीन बनिसकेको छ तर उसको मूर्खतापूर्ण अडानले अनेकौँ झमेलाहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । हुनसक्छ कैयौँ विज्ञान र परिवर्तनका अभियन्ताहरूले यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । यद्यपि यो निश्चित छ– विश्व पुँजीवादले विश्वमा र दलाल पुँजीवादले नेपालमा त्यसरी नै वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादका लागि ठाउँ छोड्नु पर्नेछ जसरी पोप र सम्राट्को शासनले पुँजीपतिका लागि राज्य सञ्चालनको मञ्च त्याग्नुपरेको थियो ।
Nextके स्वास लिँदा र बोल्दा पनि हुन्छ कोरोना संक्रमण ? वैज्ञानिकले गरे फेरी यस्तो दावी पढ्नुहोस
यी ५ मध्ये एक चीज पर्समा राख्नुहोस्…पैसाको कमी हुँदैन्
‘ऋणलेकहिलै पिछाछोड्दैन् ? यसोगर्नुहोस